ဇီဝနည်းဖြင်.ကာကွယ်နှိမ်နှင်းခြင်းဌာနစု – PPD Myanmar
ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုသည်မှာ ရေရှည်မှာဂေဟစနစ်မပျက်ပြားစေပဲ သီးနှံဖျက်ပိုး(ပိုး၊ရောဂါ၊ ပေါင်းနှင်.ကြွက်တွေ)ကိုလိုအပ်သလို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနည်းပညာများ ဥပမာ(ဇီဝနည်းဖြင်.ကာကွယ် ခြင်း၊ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာနည်းစနစ်များသုံးခြင်း၊ခံနိင်ရည်ရှိသောမျိုးများအသုံးပြုခြင်း)ကို စုပေါင်းပြီး ကာကွယ်နှိမ်နင်းသည်. စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးအား အဓိကဖျက်ပိုးကိုကင်း ထောက်စစ် ဆေးပြီး အမှန်တကယ်လိုအပ်မှသာ ညွန်ကြားချက်အတိုင်းသုံးစွဲရပါသည်။ သီးနှံကာကွယ် ရေးစနစ်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် လူသားတို့၏ကျန်းမာရေး၊ အကျိုးပြုမိတ်ဆွေ ပိုးများ၊ ဖျက်ပိုး မဟုတ်သောပိုးများ နှင်.ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးသော နည်းလမ်းများ ကိုရွေးချယ်အသုံး ပြုရပါမည်။
စပါးသီးနှံသည်အဓိကအစားအစာဖြစ်ပြီးအစေ့အဆန်အထွက်နှုန်း၏၂၀%ဖြစ်သည်။စုစုပေါင်းစပါးစိုက်ဧက၏၉၀%မှာအာရှဖြစ်သည်။စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးရာတွင်ဖျက်ပိုးများသည်အဓိကအဟန့်အတားများဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့်မဟာမဲခေါင်ဒေသ၏ပူနွေးစိုစွတ်သောဒေသများတွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။စပါးသီးနှံဖျက်ပိုးများအနက်ပင်စည်ထိုးပိုးများနှင့်ရွက်လိပ်ပိုးများ သည်စပါးပင်ကိုအများဆုံးဖျက်ဆီး၍ထိုဖျက်ပိုးများကြောင်းအထွက်နှုန်း၁၀−၂၀%လျော့နည်းသွားစေသည်။အရှေ့တောင် အာရှရှိစပါးကိုအဓိကအမြောက်အများစိုက်ပျိုးသောတောင်သူများသည်သမရိုးကျဖျက်ပိုးများကိုနှိမ်နင်းသောနည်းလမ်း အဖြစ်ပိုးသတ်ဆေးကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ဖျက်ပိုးများကိုကာကွယ်ရန်အဆိပ်ပြင်းသောဆေးများကိုအများအပြားသုံးစွဲခြင်းသည်အချို့သောဖျက်ပိုးများကိုပိုးသတ်ဆေးခံနိုင်ရည်ရှိသွားစေခြင်းနှင့်မိတ်ဆွေပိုးများသေစေခြင်းကြောင့် ဒုတိယဖျက်ပိုးများဆိုးရွားလာခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်သည်။သမရိုးကျဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းသည်စိုက်ပျိုးရေးဂေဟစနစ်၏မျှခြေကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေခြင်းကြောင့်လယ်ယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်ဆီးစေရုံသာမကတောင်သူများနှင့်စားသုံးသူများ
ရည်ရွယ်ချက်များမှာစိုက်ပျိုးရေးဂဟစနစ်ကိုအစဉ်ကောင်းမွန်စေရန်၊ဆန်စပါးကိုတည်ငြိမ်စွာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ် ရန်၊တောင်သူကျန်းမာရေးနှင့်စားသုံးသူများအစားအစာလုံခြုံစိတ်ချနိုင်ရေးအတွက်အနောက်တောင်တရုတ်၊လာအိုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင်ဒေသဆိုင်ရာသုတေသနများပြုလုပ်ခြင်း၊ဒေသ၏သဘာဝလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကိုက်ညီသောဖျက်ပိုးနှိမ်နင်းမှုများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ကိရိယာများနှင့်လက်ရှိနှင့်အကြိုမိုးလေဝသခန့်မှန်းမှုတို့ကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့်စီမံကိန်းဧရိယာတွင်ဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သောသက်ရှိဖြစ်သည့်ထရိုင်ဂိုဂရားမားနဂျီ စက်ရုံဆောက်ရန်နှင့်၎င်းနဂျီကိုအခြေခံသည့်ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းစနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ဤစာအုပ်ငယ်သည်မြန်မာနိုင်ငံစပါးစိုက်တောင်သူများအားဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးဗဟုသုတများရရှိစေရန်၊ ပိုး/ရောဂါခွဲခြားခြင်းနှင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများသိရှိစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
နှစ်အလိုက် ပြည်နယ်/တိုင်းများမှ တောင်သူပညာပေး ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြအနေ
ဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းသည်ခေတ်သစ်ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းစနစ်များတွင်အရေးကြီးဆုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ထိုစနစ်တွင်ဖျက်ပိုးများထိန်းချုပ်ရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်သားရဲတိရိစ္ဆာန်များ၊ကပ်ပါးကောင်များ၊ ကပ်ပါးမှိုများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အရေအတွက်များကိုတိုးပွားခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ထို့ကြောင့်ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်နှိမ်နင်းစနစ်သည်ဘေးကင်းခြင်း၊ရေရှည်တည်တံ့စေခြင်းနှင့်စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်သောနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။သို့သော် လည်းဤစနစ်သည်ဓါတုဆေးများအသုံးပြုသကဲ့သို့လျင်မြန်စွာအစွမ်းသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းနှင့့််အချို့သောဖျက်ပိုးမျိုးစိတ် များကိုသာနှိမ် နင်းနိုင်သည်။.
ဤစနစ်တွင်ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများကိုအသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။၎င်းစနစ်သည်ထိရောက်လွယ်ကူသောဖျက်ပိုးကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။သို့သော်လည်းပိုးသတ်ဆေးများသည်မိတ်ဆွေပိုးများကိုသေစေသည်။ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲခြင်း သည်တောင်သူနှင့်စားသုံးသူများကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေခြင်း၊ဖျက်ပိုးများခံနိုင်ရည်ရှိလာခြင်းနှင့်အဓိကဖျက်ပိုးမဟုတ် သောဖျက်ပိုးများပွားများလာခြင်းကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများဖြစ်စေသည်။
ဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းနည်းလမ်းသည်ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်နှိမ်နင်းများ၏အဓိကအပိုင်းဖြစ်သည်။၎င်းတွင် နည်းလမ်းများစွာပါဝင်သည်။အခြားတိုင်းပြည်မှဝင်လာသောဖျက်ပိုးများကိုဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်ခြင်းနည်းလမ်းတွင် တခြားနေရာမှဝင်ရောက်လာသောဖျက်ပိုးကိုနှိမ်နင်းရန်ရည်ရွယ်၍ဖျက်ပိုး၏မူရင်းဒေသရှိ၎င်းဖျက်ပိုး၏မိတ်ဆွေပိုးများကို နေရာသစ်သို့တင်သွင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ဤစနစ်သည်ဘက်စုံကာကွယ်ရေးနည်းစနစ်တွင်အသုံးပြုမှုနည်းသည်။
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သောဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းနည်းတွင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု၌ရှိပြီးသောမိတ်ဆွေပိုးများကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းပါဝင်သည်။မိတ်ဆွေပိုးများသည်၎င်းတို့နေလေ့နေထရှိသောပတ်ဝန်းကျင်၊ဖျက်ပိုးများနှင့်သဟဇာတဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေပိုးကိုတိုးတက်စေသောစိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များမှာ၎င်းတို့အတွက်နေစရာများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ရောင်စုံပန်းပွင့်များစိုက်ပျိုးပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။များစွာသောမိတ်ဆွေပိုးများသည်အရွယ်ရောက်လျှင်ဝတ်မှုန်များတွင်ပါဝင်သောသကြားဓါတ်ပေါ်မူတည်နေသဖြင့် ဝတ်မှုန်များပေါများ၍ အကြာကြီးပန်းပွင့်သောအပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းသည် ကောင်းကျိုးများစွာဖြစ်စေသည်။
၎င်းတို့သည်အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများ၏ကိုယ်ပေါ်(သို့မဟုတ်)ခန္ဓာထဲတွင်ဥဥသည်။ဖျက်ပိုးများ၏ဥ၊လောက်ကောင်၊ရုပ်ဖုံးနှင့်အကောင်ကြီးအဆင့်များကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည်။၎င်းသည်အင်းဆက်အသေးစားအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။၎င်းသည်အကောင်ကြီးအဆင့်သာပျံသန်းနိုင်ပြီးလောက်ကောင်အဆင့်သည်လက်ခံကောင်၏အတွင်းတွင်ပုန်းနေပြီးသီးနှံခင်းများတွင်မတွေ့နိုင်ပါ။အောက်ပါပုံများသည် ကပ်ပါးနဂျီပုံများဖြစ်သည်။ ဥပမာ-ထရိုင်ဂိုဂရားမားနဂျီသည် အလွန်သေးငယ်သော ဥကပ်ပါးပိုး များဖြစ်သည်။ ၎င်းထရိုင်ဂိုဂရားများကပ်ပါးနဂျီများကိုဤစီမံကိန်းတွင်အမြောက်အများထုတ်လုပ်မည်။
၎င်းသည်အင်းဆက်ပိုးများကိုရောဂါကျ၍သေစေသည်။အင်းဆက်များကိုရောဂါဖြစ်စေသောမှို၊နီမတုတ်၊ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဘက်တီးရီးယားအုပ်စုများပါဝင်သည်။၎င်းတို့သည်အလွန်သေးငယ်သောသက်ရှိများဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည်လက်ခံ ကောင်ပေါ်တွင်အမြောက်အများပေါက်မှသာမြင်နိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်များကိုInstitute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲနှင့် CABI တို့မှပူးပေါင်းပြုစုထားပါသည်။
Plant Protection Station, Xingan, Guangxi
Plant Protection Quarantine Station, Dehong, Yunnan
Plant Protection Centre, Laos
Tian Yi biological control co. LTD, Hengshui, Hebei